♪ GOOGLE STATION FREE WI-FI စနစ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအသုံးပြုနိုင်တော့မည် ♫ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
♪ GOOGLE STATION FREE WI-FI စနစ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအသုံးပြုနိုင်တော့မည် ♫
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Thursday, September 29, 2016 IT No comments
Google ရဲ့ အဓိက အားစိုက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ Wi-Fi ကို အိန္ဒိယရဲ့ ရထားဘူတာတွေမှာ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို Google က Google Station လို့ နာမည်တပ်ပြီး တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးတိုင်အောင် ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယခင်က၊ ဒီအရာကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ အဓိက ရထားဘူတာရုံ ၁၀၀မှာသာ ရရှိတာဖြစ်ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလကစတင်ပြီး တစ်ပတ်ကို လူတစ်သောင်းကျော်လောက်အထိ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Google အနေနဲ့ နောက်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ဘူတာရုံ ၃၀၀ ကျော်မှာ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်လိုက်တာကြောင့် အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ အလွယ်တကူ HD ဗီဒီယိုတွေ တင်တာတွေ၊ နေရာကို ရှာဖွေတာတွေနဲ့ စာအုပ်နဲ့ ဂိမ်းတွေကို အလွယ်တကူဒေါင်းတာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ Google ကဆိုပါတယ်။ လတ်တလောမှာ ဒီဝန်ဆောင်မှုကို Google က Free အနေနဲ့ ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Google က ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်ထိမ်းထားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီဟာ Google Station နဲ့တူညီတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကို နိုင်ငံတကာမှာ ပေးနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုလည်း ရှာဖွေနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအတွက်ဆိုရင်လည်း ဘူတာတွေက ဝန်ဆောင်မှုလို အကန့်အသတ်မရှိပဲ ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီး တခြား ပါတနာ အော်ပရေတာတွေ၊ ဖိုက်ဘာထောက်ပံ့သူတွေ၊ စနစ်ပြုလုပ်သူတွေကို လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေကို ရည်ရွယ်ဟန်မရှိပဲ ဆက်သွယ်ရေးအားနည်းတဲ့ အရှေ့တိုင်းနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကို ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးဇောတိက ( မဟာမြိုင် တောရ ) " ဗုဒ္ဓ၏ ရင်ခွ...
ဘယ်လိုနေပြီး ၊ ဘယ်လိုသေကြမှာလဲ
ကျောင်းသူ ၂ ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်သည့် ကျောင်းဆရာကို ...
မူးယစ်ရာဇာ စိုင်းနော်ခမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ရုပ်ရှင် ထ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ ပြည်သူများ အွန်လိုင်းမှ ဆက်သွယ်တ...
စက်စဲလမ်းဝအဝိုင်း ကျုံကဒတ်ရွာသို့အထွက် ပေါင်းကူးကြ...
SAUS T00J 4.4.2 Root
I-MOBILE FIRMWARE မြားစုစညျးမှု
Windows 10 မှာ Log in Password ကို Remove လုပ်နည်း...
full free Lava iris 510 flash file 100% Tested wit...
How to Remove Powered by Blogger – Attribution Wid...
Hisense EG971,EG978,EG981 တို့ကို firmwareတင်ပြီး ...
ဘက်ထရီပြဿနာကြောင့် Galaxy Note7စမတ်ဖုန်းတွေကို တ...
အသစ်ပြန်လဲပေးမယ့် Samsung Galaxy Note7ဖုန်းဘက်ထရ...
ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်း ရိုက်ကူးနည်း
2017 မှာထွက်မယ်လို့ သတင်းကြီးနေတဲ့ Samsung Galaxy ...
ဗလီအပါအ၀င် တရားမဝင်အဆောက်အဦ ၃၀၀၀ ကျော်ကို ဖျက်သိမ...
တရားဓမ္မ ဆုံးမစာများကို ရွတ်ဖတ်နိုင်သည့် Dhamma Pan...
အလွယ်ကူဆုံး မြန်မာ တီဗွီကြည့်ရူ့နိုင်သည့် Pyone Pl...
မြန်မာဘာသာကို အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပေးမယ့် Apk
Vivo ဖုန်းတွေကို ပါဝါပြန်မတတ်တော့ရင် ဖြေရှင်းနည်း
ဖေ့ဘုတ်စ် မှာ မေ့သွားတဲ့ Password ကို Logout မလုပ်...
Samsung Galaxy J5 SM-J500M ဖုန်း ဗားရှင်း 6.0.1 Ma...
Samsung Galaxy Note4SM-N910W8 Canada ဖုန်းဗားရှင...
Samsung Galaxy J3 2016 SM-J320P Sprint USA ဖုန်းကိ...
MOBILE SOFTWARE SERVICE ONLINE TRAINING...(1)
အသက်(၆၀)ကျော် အဘွားအိုတစ်ဦး ခေါင်းကို ဓားထိုးအသတ်...
♪ DIGITAL LIFE JOURNAL ISSUE VOL-5 ၊ ISSUE 19 (12....
♫LOCK ကျသွားတဲ့ FACEBOOK ACCOUNT ကို ပြန်လည် ရယူဖိ...
♪ “FACEBOOK နှင့် AD BLOCKERS တို့တိုက်ပွဲဝယ်” ♫
နိုင်ငံသားများရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ လုံ...
ပေါင်မြို့နယ်၊ မုတ္တမကျေးရွာတွင် အသက် ၁၂ အရွယ် ကလေး...
♪ SMART PHONE များမှာပါတဲ့ “USB TETHERING” အကြောင်...
Samsung Galaxy On5 SM-G550T1 ဖုန်းကို TWRP Recover...
မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ကူညီသူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားကို ထိ...
တရားမ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေကို ဖမ်းဆီးမ...
Letter to picture Teach your kids through this won...
* မဟာ ပဋ္ဌာန်း ဒေသနာတော် *
ချဲ၃လုံး ၆၅၀ ထွက်သွားပါပြီး ၁၆.၉.၂၀၁၆
ငါးဖမ်းသောခုံစင်တွင် ငါးဝင်ကောက်၍ လည်ဂုတ်အား ဓားဖြ...
နေပြည်တော်က ဗိုလ်မှုးလင်မယားသေဆုံးမှု သမီးဖြစ်သူက အြ...
ထိုင်းမှာ လူကုန်ကူးမှု ပပျောက်ရေး ဆုတံဆိပ်တွေကို မြ...
မီးနီကိုကျွံလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို အသားအနာခံပြီး ရှေ့ကပ...
Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510S ဖုန်းဗားရှင်း 6.0....
အင်တာနက် မရှိဘဲနဲ့တောင် Facebook ပေါ် ပို့စ်တင်နိုင...
Tutorial Kelopak Bunga Berguguran Di Blog
Create Separate Contact Page in Blogger
SM-J700F&SM-J500G [Firmware+TWRP Recovery Mode+Roo...
ကျိုက္ခမီမြို့ ရေလယ်ဘုရားပွဲတော် state show တွင် ပါ...
သွေးလှူခြင်းကြောင့် ရလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
♪ " အားသွင်းရင် ဒါတွေ စဉ်းစား " ဆောင်းပါးရှင် - နေ...
♪ တရားဝင်ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ SAMSUNG ရဲ့ ANDROID စ...
Z3X SAMSUNG TOOL PRO 24.4 CRACKED (WITHOUT BOX) 10...
♪ “SAMSUNG က GEAR S3 စမတ်နာရီကိုမိတ်ဆက်” ♫
Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-P355M LTE အတွက် ဗားရှင...
Samsung Galaxy A8 SM-A800S ဖုန်းဗားရှင်း 6.0.1 Mar...
Samsung Galaxy A9 Pro SM-A9100 ဖုန်း ဗားရှင်း 6.0....
MI3WC-MI4-MINOTE_MIUI8_ZAWGYI_INSTALLER (NO NEED R...
ဖုန်းမှ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရင် အဆင်အပြေဆုံး - DOWNLOAD...
♪ MPT က ဈေးသက်သာတဲ့ စမတ်ဖုန်း နှစ်မျိုးကို အထူး D...
INTERNET DOWNLOAD MANAGER 6.26 BUILD 1 NEW! (JUST ...
ALL IN ONE TOOL - COMMON TO ALL ANDROID
♪ “Slightly Improved Mid-range Phone GR Series” ♫
Xiaomi လို့ခေါ်တဲ့ Mi ဖုန်းတွေကို Root ပြုလုပ်စရာမလ...
PC တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ WINDOW မြှင့်နိုင်ရန် မိ...
ANDROID VERSION 5.0 , 5.1.1 ဖုန်းတွေ မြန်မာစာမှန်ေ...
အသက် ၈ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို ခဲအိုဖြစ်သူ မုဒိန်းက...
ခုတမျိုး၊ တော်ကြာတမျိုးဖြစ်နေသည့် ရိုးရိုးလေးဟိုတယ...
ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းသုံးခုတွင် SAMSUNG GALAXY NOT...
ရောင်စုံကီးဘုတ် (FROZEN KEYBOARD PRO EDITED VERSIO...
ယနေ့ ငွေဈေး၊ ရွှေဈေး
♪ " SONY မှ XPERIA XZ ဖုန်းအား IFA တွင် ပြသခဲ့ " ♫...
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ နည်းပညာလေးတွေတော့...
Unlock Phone Thailand All Model ( not free)
ဖားအောက်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ္တအာစိဏ္ဏဟောကြားတော်မူသော ...
Z တစ်လုံးနဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ - ZPlayer v6.95- APK